Zụta stenbolone ntụ ntụ (5197-58-0) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Stenbolone ntụ ntụ (5197-58-0)
SKU: 5197-58-0. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Stenbolone ntụ (5197-58-0), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Stenbolone ntụ ntụ video
Stenbolone ntụ ntụ isi agwa
aha: Stenbolone ntụ ntụ
Stenbolone ntụ ntụ okirikiri
Aha Mmiri: 2-methyl-δ1-4,5α-dihydrotestosterone (2-methyl-δ1-DHT) ma ọ bụ dị ka 2-methyl-5α-androst-1-en-17β-ol-3-one
Aha ndị ọzọ: Anatrofin na Stenobolone,
Stenbolone ntụ ntụ Usage
Stenbolone ntụ ntụ na-emepụta ndị na-ahụkarị steroid Anadrol, Oxitosona (oc), na Anapolon. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Stenbolone ntụ ntụ nwere ngwa yiri ogige atọ ndị ọzọ. Syntex mepụtara Stenbolone raw ntụ ntụ dịka ntụgharị dị nro na ụlọ ọrụ Anadrol ahụ na-egbu egbu. Ụlọ ọrụ ahụ na-enwe ọganihu n'ihi na Stenbolone uzuzu abụghị imeju na-egbu egbu ma ọ bụ na ọ na-eme ka ọ dị mma, ọ bụkwa nanị ntakịrị ihe-drogenic. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere mmetụta yiri nke ahụ na Anadrol na ọrịa anaemia site na ọbara ọgbụgba nke na-adịghị mma n'ihi na ọ na-eme ka ọnụọgụ ọbara ọbara dị elu. N'ihi nke a Stenbolone raw powder bụ karịsịa uwe-ike maka ndị na-asọmpi egwuregwu ebe ọ na-eme ka ọ dị elu mgbe ọ nwụrụ. Na-eme ka ndị na-ewuli onwe ha ike n'izu ole na ole tupu onye mmeri na-enwekarị ọkpụkpụ catabolic na ọnọdụ nke ọzụzụ. Stenbolone uzuzu ngwa ngwa ma nwee ike ịdaba na nke a na-enye aka inweta ezigbo ọdịdị ebe ọ na-esighị mmiri ma ghara iweli etiti estrogen. Otú ọ dị, iji wuo ike na uka, Otú ọ dị, Stenbolone raw powder bụ nke dị nnọọ ka Anadrol, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-akpọ ya Anadrol injectable. Stenbolone ntụ ntụ nwere mmetụta anabolic na androgenic karịa nsụgharị ọnụ na ọ na-eduga na uru ahụ siri ike kama nke siri ike na-enweta yana uru uru dị oke. N'ihi nke a, ndị inyom na ndị na-eme egwuregwu steroid na-ahọrọ ya, nakwa site n'aka ndị toro eto na-enweta afọ ojuju na-enweghị atụ egwu mmetụta dị ịrịba ama. N'agbanyeghị nke a, Stenbolone raw powder bụ, karịa ihe niile, m na-asọ oyi steroid nke America "Steroid Guru" Daniel Duchaine na ya akwụkwọ Underground Steroid Handbook 2: "Nke a bụ ezigbo steroid iji mgbe dieting ..."
Gịnị bụ usoro onunu ogwu Stenbolone
Ebe ọ bụ na Stenbolone ntụ ntụ dị n'ụdị acetate ọ nwere nanị obere ọkara ndụ ka oge na-aga mgbe nile iji dị mkpa iji nwee ike ịdị elu na mgbe niile. Maka nsonaazụ dị mma Stenbolone ntụ ntụ na-ejikarị eme kwa ụbọchị ma gbanye ma ọ dịkarịa ala ọ bụla ụbọchị 2. Nchịkọta izu kwa ụbọchị maka ndị na-eme egwuregwu bụ 200-300 mg. N'ihi nke a, a na-ahọrọkarị 50 mg ike ma onye na-eme egwuregwu na-achọpụta otu nde milliliter na-achịkwa kwa ụbọchị ma ọ bụ mechie ọkara iji ya. Ụmụ nwanyị na-eme nke ọma na 100-150 mg / izu ma na-ekewa usoro ọgwụgwọ ha kwa izu n'ime akụkụ atọ. Mmetụta ndị nwere ike imepụta dị ntakịrị ebe ọ bụ na imeju na imeju nke ọma na edemas, gynecomastia, na ọbara mgbali elu adịghị eme. Akụkụ nke ihe otutu na imewanyewanye ike na ụmụ mmadụ dị obere ma dị ntakịrị, dịka nbelata mmepụta nke hormone ahụ. Mgbaàmà nke mmikarị na ụmụ nwanyị na-esite na-esitekarị ma maka ọtụtụ n'ime ndị nwere nlezianya mgbe a na-enye ihe dị elu ma ọ bụ mgbe oge nkwonkwo dịruru ọtụtụ izu. Enweghị ngesị na stenbolone raw ntụ ntụ, ya mere, enweghị onyinye mbụ ma ọ bụ nṅomi nwere ike ịchọta na ahịa ojii.
Ihe nlele nke Stenbolone ntụ ntụ maka ụmụ nwoke.
1 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
2 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
3 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
4 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
5 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
6 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
7 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
8 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
9 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
10 500mgs / izu 250mgs / izu 20mgs / ed 7caps / ed
Kedu Stenbolone ntụ ntụ na-arụ ọrụ
Stenbolone ntụ ntụ yiri nnọọ ma dromostanolone na oxymetholone. Ọ bụ ihe mgbakasị nke DHT nwere njikọ abụọ n'etiti carbon 1 na 2 na otu methyl na ọnọdụ 2. Otu akụkụ methyl na ọnọdụ 2 na-echebe ngwongwo ahụ site na aromatization ka estrogen na ruo ogo ụfọdụ, 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase na-arụ ọrụ ahụ. Nke a 2-methyl otu na-ebelata ihe nkwekọrịta na androgen receptor dịtụ. Nke a na-eme maka ihe na-eme ka ihe na-eme ka onye na-enweta ihe na-eme ka androgen karia primobolan ma dị ka primobolan, a gaghị agbanwe agbanwe steroid a na-eme ka metabolite estrogenic site na aromatization. Stenbolone raw ntụ ntụ na-ewere na ụfọdụ na-abụ gentler version nke oxymetholone. Onye steroid a nwere usoro yiri nke ahụ na oxymetholone mana ọ bụghị C-17 alpha alkylated ya mere ọ nwere ntakịrị mmetụta na ọrụ imeju. Stenbolone ntụ ntụ na-emepụta ọbara ọbara uhie dị ka oxymetholone ma metabolized ruo ogo ụfọdụ ruo dromostanolone nke egosikwara ịbawanye ọbara ọbara uhie.
Mmetụta ndị dị na ya ga-adị obere, na-enyeghị aka na estrogen mgbe nile. Ya mere, mmetụta dị otú ahụ estrogenic dị ka mmụba ọbara na-arịwanye elu, ụra nke ọma, njigide mmiri, na gyno agaghị eme. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, anatrofin nwere àgwà etrogenic dị ntakịrị, ọbụna na-enweghị mmekorita nke estrogen, na-eduga na enwere ike inwe ihe otutu, akpụkpọ anụ, na ọgba aghara aghara. N'ihi ya, ndị inyom kwesịrị ịkpachara anya maka steroid a.
Stenbolone ntụ ntụ
Stenbolone raw ntụ ọka Marketing
Stenbolone ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Stenbolone raw ntụ ntụ adịghị yie ka ọ ga-eweta nha dị ka anadrol ma ọ bụ dị ka nnukwu bloat ka o yikarị ka o nweghị ọrụ mmechi na 11-beta hydroxylase. A na-achọ ka a na-agbanye ntụ ntụ nke Stenbolone kwa ụbọchị n'ihi na ọkara ndụ nke acetate ester. Ọzọkwa, acetate ester yiri ka ọ na-emepụta ihe mgbu na ọzịza na saịtị ịgbawa. Stenbolone raw ntụ ntụ nwere ọrụ androgenic yiri nke 1-testosterone, ụdị unmethylated nke ọgwụ a, mana ya na ọrụ anabolic. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ntụgharị aka a na-agbanye na 3-alpha hydroxy metabolites. Stenbolone ntụ ntụ na-enye ọtụtụ n'ime uru nke oxymetholone na-erughị bloating na elu ọbara mgbali.
Esi azụta Stenbolone ntụ ntụ si AASraw
Stenbolone raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
8 Ihe Dị Mkpa Dị na Powder Stenbolone